Unyaka wokuqala wokuphila kwengane kaningi kuba lukhuni kakhulu, ngoba ngalesi sikhathi ingane iyagula ngezifo ezihlukahlukene. Izifo ezivamile zezingane ezingaphansi konyaka owodwa - i-colic, i-intertrigo, i-otitis, i-ARVI, impumulo egijima, isifo sohudo, i-apnea, i-dermatitis. Abazali abangenalwazi baqala ukwesaba ngoba abazi ukuthi baziphathe kanjani esimweni esithile. Isifo ngasinye sidinga ukwelashwa kwayo, futhi ngesikhathi esincane kakhulu - ukwelashwa okunomusa kakhulu.
Izingane ezingaphansi konyaka owodwa: izifo, izimpawu, ukwelashwa.
Uma ingane isifo sokutheleleka ngegciwane lesifo esinamandla, khona-ke izimpawu ziyizi:
- izinga lokushisa eliphezulu;
- impumu egijima, ukukhwehlela;
- ukwenqaba ukudla, ukukhathazeka, ukulila;
- ukucasula kwesihlalo.
Ukutheleleka kwe-Adenovirus kuthinta izinambuzane ezinamakhaza emakhaleni, i-bronchi, umphimbo, i-pharynx, iqala ikhala eligijima nokukhwehlela, ama-lymph nodes ku-ARVI avame ukwanda, ngezinye izikhathi i-cornea yamehlo ne-conjunctiva igula, ezimweni eziningi amehlo aphenduka avule futhi aphule. Ngokungajwayelekile kakhulu ukuqhuma okubomvu emzimbeni.
Izindlela zokwelapha izifo eziphefumulayo zokuphefumula:
Uma izinga lokushisa likhuphukile ngaphezu kuka-38 ° C, kufanele likhishwe phansi. Lokhu kungenziwa kokubili ngosizo lwezindlela zomuntu, futhi ngosizo lwemithi yendabuko (isibonelo, ama-suppository ama-rectal antipyretic, aqukethe i-paracetamol). Uma kwenzeka ukushisa okukhulayo, ingane akufanele ihlanganiswe ukuze ingabi ukwandisa izinga lokushisa nakakhulu. Qinisekisa ukubiza udokotela. Ukushisa kwekamelo akufanele kudlule u-22 ° C futhi akufanele kuwele ngaphansi kwe-20 ° C.
Kungaba njengenye yezimpawu ze-ARVI, nokubonakaliswa kwesifo senqubo yokuphefumula noma isimiso somzimba sokuzivikela (i-rhinitis ye-allergen). Lesi sifo sibonakala ukucinana kwesisu, ukuphuma kwamanzi, ukukhipha. Izingane ezingaphansi konyaka owodwa zigula kakhulu noma zingapheli. I-rhinitis ephezulu ibangelwa ukutheleleka, okungapheli - nezinye izici eziningi. Ngaphezu komkhuhlane ovamile, njengesibonakaliso se-ARVI, izingane zisagula nge-neurovegetative ne-allergenic rhinitis.
Uma impumu egijima ingabalulekile futhi iphila isikhathi esifushane, ingabe ingelashwa ekhaya. Kodwa kwezinye izimo ngeke kwenzeke. Khona-ke kufanele uxhumane nodokotela wakho. Ngakho-ke, uma uqaphele izimpawu ezilandelayo zezingane kuze kube unyaka, qiniseka ukuthi ubiza udokotela wakho: - umkhuhlane;
- Ngaphezu kwempumu, ukuvuvukala komphimbo nokuphefumula kubonakala;
- ingane ila ukudla nokuphuza;
- Ikhala eligijima liphela amasonto angaphezu kwamabili;
- ingane inesifo esibuhlungu noma ubuhlungu emasinini aso;
- Ngemuva komkhuhlane emakhaleni wengane yigazi.
Banika abazali inkathazo enkulu kanye nemizwa ebuhlungu yengane. Isizathu se-colic sanda ukugaya emathunjini. Abaningi bakholelwa ukuthi i-colic yenzeka ngokudla okufakelwayo, kepha eqinisweni, ngezinye izikhathi zivela ezinganeni ezondla. I-colic ngokwayo iyabonakala ekutholeni kokudla noma ngokushesha ngemva kwayo. Ngesinye isikhathi asikhathazi ingane.
Qinisekisa ukuthi ingane ine-colic ilula kakhulu: uqala ukukhala, ucindezele imilenze yakhe emzimbeni, ongenasiphelo, enqaba ukudla. Ukuhlaselwa kwalesi sifo kungaba yesikhathi esifushane (ukuhlala imizuzwana eminingana) futhi isikhathi eside (kusukela kwesigamu sehora kuya kweyesibili), singashadile futhi siphindaphindiwe.
Ukwakheka kwegesi eliphezulu kubizwa ngokuthi:
- ifomula yobisi olungalungile;
- ukwephulwa kokudla komsizi wesifazane;
- ukungenisa umoya ngesikhathi sokudla (i-aerophagia);
- ukuqothulwa; - ukudla okubangelwa ukudla;
- ukungasebenzi kahle kwe-lactose emathunjini omntwana.
Uma uthola ukuthi ingane ikhona, yenza lokhu okulandelayo ukumsiza:
- gqoka isisu sakho,
- Ukumisa isitho sesisu somntwana ngesisindo sokujikeleza, ungacindezeli;
- faka i-diaper eyomile emfudumeni,
- Yenza ingane ibe netiyi we-herbal (uma ibeletha), noma ingxube yezokwelapha (uma isondlo sokufakelwa).
Ngezinye izikhathi kunokwenzeka ukuphazamisa ingane kusuka kwi-colic ngomculo otholile, noma yimiphi imiphumela yemisindo, amathoyizi, amasu, njll. Uma i-colic yengane ihlala njalo futhi ihlala isikhathi eside, imithi ekhethekile enqunywe udokotela wezingane kufanele inikezwe.
Ama-oblast avuvukala isikhumba somntwana. Kwenzeka emva kokuqhuma okukhulu, ukuvezwa isikhathi eside kumswakama noma ukugoqa ngokweqile. Ukwanda komswakama esikhumbeni kubhubhisa umgoqo wokuvikela futhi kuvulwe ukufinyelela kuma-microbes. Ngokuvamile, indawo yokuvuvukala itholakale engxenyeni ye-inguinal, axillary, interannual, yomlomo wesibeletho, izingxenye zesifuba somzimba wengane. Amaphutha angabonakaliswa njengenhlanhla encane futhi kuze kube khona ukuvela kwamacumbi, ukuphahlazeka, izilonda. Ngenxa yokushaywa kwe-diaper, ingane ingase ithole, ubuhlungu, ukushisa, ingane izoziphatha ngokungazelelwe, izinyembezi. Kubaluleke kakhulu ukuqala ukwelashwa kwalesi sifo sezingane ngesikhathi, njengoba lokhu kuzosiza ukugwema izinkinga eziningi esikhumbeni nasempilo yengane esikhathini esizayo.
Ungavimbela lezi zinkinga:
- ukushintsha ama-diapers noma ama-diapers atholakala ngesikhathi esifanele;
- ukuqhuba izinqubo ezijwayelekile zokuhlanzeka kwengane;
- ngokumisa isikhumba somntwana ngendwangu elithambile; - ngokuqhuba amabhati okugeza, okunikeza isikhumba amandla okuma, futhi amanxeba kulokhu aphulukisa ngokushesha;
- ukuphatha njalo isikhumba esikonakaliswe ngama-disinfectants nemikhiqizo yokunakekela isikhumba.
Uma ubomvu buvele ngemuva kokusetshenziswa kwamabhilidi athile, kungenzeka ukuthi kungukungabi nempilo. Futhi ama-diapers kufanele athathe indawo.
Lesi sifo ezinganeni kuze kube sekupheleni konyaka.
Izizathu zalo zingase zibe:
- ukwephula ukuhlanzeka;
- ukudla okungavumelani nonyaka wengane, noma ukungafani nekhwalithi.
Izimpawu zezihudo ziqala ngokumangalisayo nezihlalo eziningi zamanzi, okuvame ukuhambisana nokuhlanza noma isicanucanu. Uma isifo sohudo singelashwa ngesikhathi esifanele, siholela emiphumeleni enzima - ngisho nasekufeni. Ngakho-ke, ukubhekisela kudokotela kulesi simo kuyadingeka!
Umhla wezinsuku nokudla komntwana ngonyaka ongu-1. Ukuthuthukiswa kwengane eneminyaka eyodwa
Ukubamba umama omncane
Ukondla umntwana yisikhathi esibalulekile
Ngingayithola yini amafutha emanzini?
Amaphupho agcwaliseka: uRamzan Kadyrov ugqoke uMikhail Galustyan ezandleni zakhe, ividiyo
Ukushayela inkukhu, ama-alimondi nesinamoni
Indlela yokunikeza umuthi wekati
Indlela yokubukeka encane kuneminyaka yakho
Izimpawu kanye nokwelashwa kwe-herpes ngokobulili kwabesifazane
Inyoka enobuthi iyaluma ingane
Indlela yokusinda ekufeni kwengane
Abadlali be-Paralympic baseRussia abavunyelwe ukwenza eRio de Janeiro
Ukuphulukiswa nemikhiqizo yemilingo yodaka
Amandla enhloso, ukuthi ungabona kanjani amaphupho akho nezifiso zakho
Ophiuchus: isici sesibonakaliso seshumi nesishiyagalolunye se-horoscope. Ukuhambisana nezinye izimpawu ze-Zodiac